Dukaamo ganacsato Soomaali ah leeyihiin oo lagu gubay Koonfur Afrika - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeUncategorizedDukaamo ganacsato Soomaali ah leeyihiin oo lagu gubay Koonfur Afrika
July 29, 2016 Puntland Mirror Uncategorized 0
Dukaamo ganacsato Soomaaliyeed leeyihiin oo lagu gubay dalka Koonfur Afrika. Sawirka: Radio Muqdisho.
Cape Town-(Puntland Mirror) Dukaamo ay leeyihiin ganacsato Soomaaliyeed ayaa lagu gubay dalka Koonfur Afrika, kuwo kalena waa la boobay.
Dhibaatada ayaa ka dhacday magaalada Mbkweni ee gobolka Western Cape.
Magaalada ayaa waxaa ka socda mudaaharaadyo balaaran kadib markii shacabka magaaladaas loo diiday in ay guryo jiingado ah ka dhistaan dhul banaan.
Sidoo kale waxaa la boobay dukaamo kale oo ay leeyihiin dad ajaaniib ah oo ay kamid yihiin Itoobiyaan.
Tobankii sanno ee u dambaysay dalka Koonfur Afrika waxaa lagu dilay tobonaan ganacsato Soomaaliyeed waxaana lagu boobay hanti kumanaan dollar lagu qiyaasay.
August 24, 2016 Afhayeenka maleeshiyada Al-Shabaab oo sheegay in ay sii wadi doonaan weraradooda ka dhanka ah Puntland
February 20, 2017 Madaxweyne Farmaajo oo u balanqaaday abaal-marin dhan $100,000 cidii soo sheegta macluumaad ku saabsan gaari lagu sameynayo walxaha qarxa
Booliiska Kenya ayaa sheegay maanta oo Sabti ah in maleeshiyaad ka badan 100 oo al-Shabaab ah ay soo weerareen saldhig booliis oo ku yaala waqooyiga bari ee dalka Kenya saqdii dhexe ee xalay, kuwaasoo dhaawacay [...]